‘पोइ पर्‍यो काले’ माथि पूजा र आकाशको आश « THULOPARDA.COM
पर्दामा दर्शकले निकै रुचाएको जोडी पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठको नयाँ चलचित्र ‘पोइ पर्‍यो काले’ आउँदो कात्तिक ८ गतेबाट देशव्यापी प्रदर्शनमा आउँदैछ । यसअघि यी दुई चलचित्र ‘रामकहानी’ मा देखिएका थिए । सम्भवतः यसै वर्ष पूजा र आकाशको प्रमुख भूमिका रहेको अर्को चलचित्र ‘सम्हालिन्छ कहिले मन’ पनि प्रदर्शनमा आउनेछ । दर्शकले निकै रुचाएका कारण यो जोडीलाई चलचित्रमा लिन निर्माताबीच ठूलै हानाथाप हुने गरेको छ ।
चाँडै दुईले नयाँ चलचित्र गर्न लागेको पनि चर्चा छ । तर, यस विषयमा औपचारिक जानकारी प्राप्त भएको छैन । एकपछि अर्को चलचित्रमा एकसाथ काम गरिरहँदा बजारमा दुईको प्रेम चर्चा चल्न थालेको छ । तर, उनीहरु आफूको सम्बन्ध साथीभन्दा माथि नभएको दाबी गर्छन् । दुबै सिंगल रहेको र अहिले करिअरमा फोकस रहेको बताउँछन् । शिशिर राणा निर्देशित चलचित्र ‘पोइ पर्यो काले’ लाई लिएर उत्साहित पूजा र आकाश फिल्मले दर्शकलाई निराश नबनाउने दाबी गर्छन् ।
चलचित्रको कथा मन परेर काम गर्न राजी भएको दुईको बोली छ । यस फिल्ममा पूजा र आकाशको जोडी बाँधिएको छ वा छैन ? भन्ने कुरा अहिलेसम्म निर्माण टिमले गोप्य राखेको छ । ट्रेलरमा देखाइएअनुसार, पूजालाई कालो वर्णको सौगात मल्लले मन पराउँछन् । सौगातलाई भने सृष्टि श्रेष्ठले मन पराउन थाल्छिन् । उता, आकाश सृष्टिको सुन्दरतामा घायल भएका छन् । पूजा भने मन मनै आकाशको प्रेममा डुब्दै गएकी छन् । कन्फ्यूजनले भरिएको ट्रेलरले चलचित्रमा ‘को-कसको जोडी’ भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो पर्छ ।
पूजा र आकाश पनि चलचित्रमा ‘को-कसको जोडी’ भन्ने थाहा पाउन हलसम्म पुग्ने पर्ने बताउँछन् । चलचित्र पूर्ण रुपमा कमेडी र सामाजिक कथामा बनेको उनीहरुको भनाई छ । चलचित्रको मूल कथा अभिनेता सौगात मल्लको वरिपरि घुमेको छ । किरण नेपाली प्रस्तुतकर्ता रहेको चलचित्रमा राजिव गुरुङ र सरोज नेपालीको लगानी छ । अमलादेवी राई चलचित्रकी कार्यकारी निर्माता हुन् । युट्युबमा सार्वजनिक गीतसंगीत र ट्रेलरले चलचित्रको राम्रो हाइप निर्माण गरेको छ ।
मेरो कारणले चलचित्र बिग्रने होइन : शिल्पा
अभिनेत्री शिल्पा पोखरेल विगत ५ महिनायता घरभित्रै छिन् । लकडाउनपछि उनी आफ्नो शरीरलाई फिट बनाउन
‘सेल्फी किङ’ निर्देशकको चलचित्रमा आर्यन
अभिनेता आर्यन सिग्देल र ‘सेल्फी किङ’ फेम्ड निर्देशक विशाल सापकोटाबीच नयाँ चलचित्रका लागि टिमअप भएको
फ्यान फलोइङ बढाउन टिकटकमा पल
यूट्युबजस्तै टिकटक निःशुल्क प्रयोग गर्न सकिने एप हो । सन् २०१९ को सुरुदेखि टिकटक सबैभन्दा
निरुताको प्रश्न : अग्रजहरुलाई सम्मान गरेर उपाधि दिने अधिकार पनि छैन ?
‘महानायक’ विवाद अझै सेलाउने पक्षमा देखिएको छैन । अभिनेत्री निरुता सिंहले शनिवार फेसबुकर्मा क स्टाटस